Home Page COVID-19 – Izikole zasekhaya iMason City COVID-19
NjengoSuperintendent wakho, Ngifuna wazi ukuthi silapha ukuzokweseka nokunakekela umphakathi wethu ngokuxhumana okungaguquguquki, izinsiza, nethemba.
Njengoba sithuthuka ngalesi sehlakalo esiyinselele, sizoqhubeka nokuxhumana – ukukwazisa esikwaziyo, lapho sesikwazi. Sicela uchofoze ngezansi ngomlayezo wethu wansuku zonke.
Hlala uxhumekile phakathi komcimbi we-COVID-19
Ngo-Ephreli 6, sizoguqukela endaweni ekude yokufunda. Ngenkathi abasebenzi bethu belungiselela lo msebenzi, uzothola izinsiza kusebenza eziningi ezenzelwe umfundi wakho.
Funda kabanzi: Ukufunda Okude
Funda kabanzi mayelana nokuphila kwengqondo kweMason City School. Thola amasu okubhekana nalesi sikhathi.
Thola ukuthi ungayithola kanjani i-Chromebook uma ingane yakho ingenalo idivaysi. Funda ukuthi ungakuthola kanjani ukwesekwa emasontweni ezayo.
Akekho emphakathini wethu okufanele alambe. Thola ukuthi ungakuthola kanjani ukudla, nokuthi iM-MCS isekela kanjani imindeni yethu ebhekene nokungavikeleki kokudla.
Lesi yisikhathi esibaluleke kakhulu kubantu abaningi emphakathini wethu. Siyazi ukuthi i-Comet CommUNITY yethu ihlala ikulungele ukusiza. Thola izindlela zokuxhasa imindeni, amabhizinisi endawo (ikakhulukazi labo abanomoya wokungenisa izihambi) nabanye abadinga usizo lwethu.
Buka izimpendulo zemibuzo ejwayelekile evela emindenini yethu nasemphakathini.
Isuka Esibhedlela Sezingane eCincinnati
Okwengeziwe Izinsiza ze-COVID-19
Silapha wena ...
Imilayezo evela kothishanhloko bethu
“Ngisho nangezikhathi ezinzima, Ngizizwa nginethemba kubasebenzi bethu, abafundi nomphakathi ngenxa yesifunda sethu 3 Ama-Big Rocks. Sicabanga ngabafundi kanye nemindeni yethu ngalesi sikhathi futhi sifuna ukuthi wazi ukuthi abasebenzi bethu bezikole eziphakeme bakulungele njengoba siqala lolu hambo olusha. Ngenkathi lokhu kuyinselelo entsha, Abasebenzi be-MHS bayaziqhenya kakhulu ngokuthi "Ukuhlala eMnyamelweni" futhi baphendule kulezi zigameko ukuze bonke abafundi nemindeni yethu bakhule usuku nosuku futhi baqhubeke nokufeza iSiko lethu leComet njengabafundi. "
Bobby DoddMHS Uthishanhloko
“Kuyisibusiso esikhulu ukuthi besisebenza ngeSiko lethu leComet kanye nokuqonda kwethu i-E + R = O ngaphambi kwalesi sehlakalo se-COVID-19. Ngizizwa nginenhlanhla enkulu ukuphendula lo mcimbi obumnandi nomphakathi wethu weMason Comet. ”
ULauren GenteneUthishanhloko wesikole iMason Middle
“Abasebenzi bethu, abafundi nomphakathi kudingeke ukuthi bafunde ukujwayela nokuzivumelanisa nezimpukane emasontweni amabili edlule. Abasebenzi e-MI “bangabanikazi besikhashana” futhi basebenzela ukuhlala bexhunyiwe kubafundi futhi bahlele izifundo ezizokuqhubeka nokufunda. Siyaphuthelwa ukubona abafundi bethu nsuku zonke kodwa babheke phambili ekuthatheni loluhambo ndawonye. Hlala uphilile futhi uphephile! Hlala Unamandla MI!”
“Kuthokozise inhliziyo ukubona izizatho zomusa nethemba ezivela kuma-ME Comets ethu. Siyaqhubeka nokuphila isiqubulo sethu sesikole, 'Umusa Uqala ngo-M.E.' ngokufinyelela kumalungu weComet Country ukuxhumana nabo futhi ubazise ukuthi siyabanakekela. Abasebenzi bakaMason Elementary bazibophezele ekusekeleni abafundi bethu nemindeni yethu. ”
UJavaris PowellMason Elementary Principal
"Akukaze kubaluleke kakhulu ukuhlala phansi izitebele zethu zeComet Kid nokwenza umdlandla, uzwela, ukuguquguquka, ukubekezelela nethemba. Imindeni yethu, abasebenzi nabafundi bebelokhu bexoxa izindaba zokuthi ukuziphilisa lezi zimfanelo kushintsha kanjani ngempela impilo kulo mzuzu. Siyaziqhenya kakhulu ngezingane zethu zeComet eMphakathini WamaMason!!”
UMelissa BlyIsikhungo Sokubeletha SaseMason
Ukunakekela abafundi kanye nemindeni yethu ...
Ukuthi kungukudla, impilo yengqondo iyasekelwa, ubuchwepheshe, noma izinsiza zokufunda - silapha umphakathi wethu waselokishini iMason ne-deerfield.